XOG: Zinedine Zidane Oo Markale Iscasili Kara, Ernesto Valverde Oo Horyaalkii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Isha Ku Haya, Is-Hubaynta Diego Simeone Iyo Curashada Horyaalka La Liga. - Gool24.Net
XOG: Zinedine Zidane Oo Markale Iscasili Kara, Ernesto Valverde Oo Horyaalkii Saddexaad Oo Xidhiidh Ah Isha Ku Haya, Is-Hubaynta Diego Simeone Iyo Curashada Horyaalka La Liga.
August 16, 2019 Mahamoud Batalaale
Horyaalka La Liga ee xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 ayaa barri oo jimce ah si rasmi ah loo daah furi doonaa waxaana lagu bilaabi doonaa kulanka Barcelona ay booqanayso kooxda Athletic Bilbao.
Kooxaha horyaalka La Liga ayaa todobaadkan bilaaban doona xili ciyaareed loo arko in uu noqon karo mid aad u xiiso badan laakiin walalka jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa haddaba ah mid aan qarsoonayn waxaana jira warar sheegaya in Zidane uu markale aduunka iscasilaad kaga yaabsan karo.
Inta badan tartanka koobka horyaalka La liga ayaa noqda mid u dhexeeya saddexda kooxood ee Barcelona, Real Madrid iyo Atletico Madrid, wuxuuna Zidane sheegay in muhiimada ugu wayn ee xili ciyaareedka cusub uu siin doono koobka La Liga.
Haddaba iyada oo barri si rasmi ah loo daah furi doono xili ciyaareedka cusub ee La Liga, waxaanu eegaynaa xaalada ay ku jiraan saddexda kooxood ee Spain ugu waa wayn ee koobku uu markasta dhexdooda yaalo.
Riyada Wanda Metropolitano Iyo Xiisaha Jamaahiirta Atletico Madrid:
Jamaahiirta kooxda Atletico Madrid ayaa sugi kari la in ay arkaan kooxdooda oo xili ciyaareedka cusub ee La Liga bilaabanaysa iyada oo saxiixyada badan ee uu Simeone sameeyay ay yihiin kuwa farxada badan abuuraya.
Diyaar garowgii kulamadii saaxiibtinimo ee Atletico Madrid ayaa wanaag badan laga soo arkay waxaana ugu siii farxad waynaa guushii ay Juventus ka gaadheen taas oo loo arkayay kooxaha ugu awooda badan xagaagan.
Boqolkiiba 80% ka mid ah taageerayaasha Atletico Madrid ayaa guul ku tilmaamay diyaar garowgii kooxdooda ee kulamadii saaxiibtinimo waxayna u arkaan in ay kooxdoodu diyaar u tahay bilaabashada La Liga.
Isbadalka wayn ee xagaagan uu Diego Simeone ku sameeyay kooxdii uu koob la’aanta ugu soo dhamaystay xili ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa ah mid xiiso badanka buuri karta horyaalka La Liga iyo tartanka kooxaha Yurub.
Atletico Madrid waxay xili ciyaareedka cusub noqon kartaa koox halis wayn galin karta kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ee tartanka koobka horyaalka La liga.
Riix 2,3 aad si aad xogta oo dhan u akhrisato